Izigidi ezili-100 zabantu zisebenzisa Iifayile zikaGoogle | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Izigidi ezili-100 zabantu basebenzisa iiFayile zikaGoogle
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, uGoogle usungule usetyenziso lweeFayile zikaGoogle, usetyenziso apho afuna ukuba abasebenzisi balwenze Unesixhobo esicoceke kangangoko kuzo zombini inkunkuma kunye nendawo yasimahla. Njengokuba iminyaka ihambile, bayanda abasebenzisi abasamkelayo esi sicelo.
Ngokwesigebenga sokukhangela, inyanga nenyanga bangaphezulu kwe-100 lezigidi abasebenzisi abasebenzisa usetyenziso ukulawula indawo kunye nomxholo wee-smartphones zabo. Esi sicelo, esasenzelwe kuqala abasebenzisi esinendawo encinci yokugcina kwiitheminali zabo, ibe sisicelo esifanele ukuba sonke siyifakile.
Iifayile zikaGoogle ziyasivumela lawula ngendlela ekhawulezayo nelula yonke imixholo esinayo kwisiphelo sethuAyizizo iifoto kunye neevidiyo kuphela, kodwa neefayile zethutyana, amaxwebhu ... iifayile esinokuzilawula kwaye sizishukumise ngaphandle kwengxaki ukuze wonke umxholo uhlelwe ngawo onke amaxesha.
Ngokwesigebenga sokukhangela, mzuzwana ngamnye isicelo Iifayile zikaGoogle zikhulula i-8GB yendawo yokugcina, elingana neefoto ezingama-2.200. Enkosi kwiifoto zikaGoogle, ukukhulula indawo kwisixhobo sethu kulula kakhulu, kuba eliqonga le-giant yokukhangela ngokuzenzekelayo lijongana nokwenza ugcino lwazo zonke iifoto zethu.
Omnye wemisebenzi yokugqibela ukongezwa kwesi sicelo yimowudi emnyama, indlela emnyama nIya kukuvumela ukuba ugcine ibhetri ukuba isiphelo sethu sinesikrini se-OLED, Uhlobo lwesikrini olukhanyisa kuphela ii-LED ezahlukileyo kumnyama. Ikwabandakanya ividiyo kunye nomculo oya kuthi usivumele ukuba sonwabele umxholo wethu ngaphandle kokushiya usetyenziso nangaliphi na ixesha.
Iifayile nguGoogle ziyafumaneka ukhuphelo simahla ngokusebenzisa ikhonkco elilandelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Izigidi ezili-100 zabantu basebenzisa iiFayile zikaGoogle
I-LG yazisa ngefowuni-screen ngoSeptemba
Fumanisa ukuba ungayifumana njani i-OUKITEL C17 Pro